သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: တောင်ပေါ်မြို့လေး
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:31 AM
မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းလေယဉ်မယ်တွေ အိမ်ထောင်ကျ လို့ ground staff ဖြစ်ကုန်တာ သတိရတယ်။ ရီရတယ်နော်။
အင်မတန် စိတ်ဝင်စား မိတာက တော့ ဂျင်းဂျက်ကတ်ပိုင်ရှင်ပဲ။ ဟိ
ခွင့်လွှတ်ပါ။ ရောက်လာသူများအတွက် သတင်းပေးချင်လို့ပါ။
ဒီအချိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းပြောင်းလဲမှုမှာ သိပ်အရေးကြီးနေတဲ့ အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ။ မြန်မာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ အချိန်ကို မျောပြီးလိုက်နေလို့တော့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒီလိုအချိန်အခါကိုရောက်လာဖို့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက် အုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်မှာ ၁၉တိုင်အောင် ရင်းခဲ့ရပြီးပြီ။
ဒီစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်က လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့လူတွေဟာ ၁၉၈၈ ကျောင်းသားရဟန်းပြည်သူ အားလုံးပါဝင်တဲ့ လူထုအုံကြွမှုတွေကနေ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သေတဲ့သူတွေ သေခဲ့ကြပြီးပြီ။ ဘ၀တွေပျက်လို့ ဒုက္ခိတဘ၀နဲ့ လူညွန့်တုံးတဲ့သူတွေ တုံးကုန်ကြပြီးပြီ။ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ကိုယ့်ပြည်သူလူထု ကောင်းစားရေးအတွက် စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲခံပြီးတော့ ကိုယ်ကျိုးစွန့် ရင်းနှီးနေတဲ့ အမျိုးသမီးကောင်းတွေ အမျိုးသားကောင်းတွေ လူငယ်တွေ နဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုလူကြီးတွေ ခေါင်းငုံ့မခံ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေး ဒီနေ့ထိတိုင်အောင် ပေးဆပ်နေကြဆဲရှိနေသေးတယ်။ တောထဲတောင်ထဲ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ကြုံရာနေရာကနေ ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကို ရင်ဆိုင်ပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရေးအတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်ရာကနေ လက်နက်ကိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကလောင်ကိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်မှုအရပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုးစားချီတက်နေကြတဲ့ ကိုယ်နိုင်ငံ ကိုယ်ပြည်သူလူထုကို လေးစားချစ်ခင်လှတဲ့ အမျိုးချစ် နိုင်ငံချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း အများကြီးပါပဲ။ ဒီလိုလူတွေအားလုံးဟာ နောက်နောင်မှာလည်း မျိုးဆက်စီးဆင်းမှုမပျက် ဆက်လက်ပြီးရှိနေဦးမှာပဲ။ ဒီလိုရင်းနှီးပေးဆပ်မှုတွေက ၁၉၆၂ ဦးနေ၀င်းခေါင်းဆောင်တဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို မတရားသိမ်းယူခဲ့ရာကနေ အခုလက်ရှိ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ လက်ထက်အထိပဲ။
ဒါကို မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်နေပြီးသားပါ။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူထုတရပ်လုံးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ လူတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံလေးစား ရပါမယ်။ ကိုယ်ကျိုးစွန့် ရင်းနှီးပေးဆယ်မှုဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးအတွက်ပဲ။ တဦးတယောက်ကောင်း လူတစု ကောင်းစားရေးအတွက် မဟုတ်ဘူး။ တန်ဖိုးမြင့်မြတ်သူတွေရဲ့ သစ္စာကို လူတိုင်း လူတိုင်းက အသိအမှတ်ပြုရပါမယ်။ ဒီတခါတော့ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှု လိုအပ်နေပါပြီ။ ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲ ပြန်ကြည့်ပါဦး။ စားဝတ်နေရေးမပြေလည်မှုတွေ၊ ကုန်ဈေးနှုံးကြီးမြင့်လာမှုတွေ၊ ၀င်ငွေအတွက် လစာနည်းပါးမှုတွေ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးနေတာတွေ၊ ရောဂါထူပြောပြီး ဆေးဝါးကုသနိုင်ဖို့ ဆေးဖိုးမတတ်နိုင်မှုတွေ၊ ကိုယ့်သားသမီး လူငယ်တွေ ပညာရေးအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျပြီး လူရာမ၀င်ဖြစ်ရတာတွေ၊ နိုင်ငံတွင်းနေထိုင်မှု အဆင့်အတန်းနိမ့်ပြီး သွားရေးလာရေး နေရေးထိုင်ရေးတွေမှာ အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်ရတာတွေ၊ နေရာတကာ စစ်ဗိုလ်အသိုင်းအ၀ိုင်းကပဲ လက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်နေတာတွေ သိသာထင်ရှားလှတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးပါ။ ဒါမျိုးတွေ ကိုယ်တိုင်ခံစားပြီး ဖြတ်သန်းလာခဲ့တာ အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့ပါပြီ အသက်တွေကြီးခဲ့ပါပြီ ၁၉နှစ်တိုင်အောင် ကြာခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဒီနေ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးကောင်းကြီးတခုပေါ်နေပါပြီ။ အခုလက်ရှိ သံဃာတော်တွေ အင်တိုက်အားတိုက် တိုင်းပြည်အတွက် စစ်အစိုးရကို သပိတ်မှောက် ဆန့်ကျင်နေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ၊ ကုန်ဈေးနှုံးကြီးမြင့်မှု အလိုမရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ စုပေါင်းပြီးတော့ ဆန့်ကျင်လမ်းလျှောက်ပွဲတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ အဲဒီအချိန်က အရှိန်အဟုန်တွေကို သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တွေက ဒီကနေ့ ထပ်ဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပါပြီ။ ဒါဟာ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် အမှန်တကယ် ရိုးသားသန့်ရှင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တည်ထောင်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးလှတဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲတခုဖြစ်နေပါပြီ။
ပြည်သူလူထု ဒကာဒကာမတွေ အကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ သံဃာတော်တွေနဲ့ လက်တွဲချိတ်ဆက်ပြီး ဒီတချီတိုက်ပွဲကို ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထုအားလုံး အတူလက်တွဲပြီး စည်းစည်းလုံးလုံး မလုပ်နိုင်ကြဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ ရှေ့ဆက်မတွေးရဲစရာပါပဲ။ ဒီတခါတော့ နောင်ရိုးတိုက်ပွဲလို အပြီးသတ် ဖောင်ဖျက်ရတော့မယ့် အချိန်ပါပဲ။ နောက်တွန့်ငဲ့ကွက်နေစရာ အကြောင်း ဘာတခုမှ မရှိသင့်တော့ဘူး။ ရာဇ၀င်မှာ မြန်မာပြည်သူလူထုဟာ အချိန်ကျရင် သွေးနီခဲ့ပါတယ်။ ရာဇ၀င်မရိုင်း ခဲ့ပါဘူး။ သမိုင်းကို နှလုံးသွေးတွေနဲ့ ရေးခဲ့ကြပါတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက်က ရာဇ၀င်ကို ဒီတခါလည်း တောက်ပြောင်အောင် သမိုင်းဝင် ကမ္ဗည်းထိုး မော်ကွန်းတင်ရဦးမှာပဲလို့ အားကိုးပါရစေ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအပေါင်းတို့။
ဗဟုသုတရတယ် မလေး....။ မကေ ပြောတာလေးတော့ လေးမလည်း အရမ်းချိတ်ဝင်စားတာပဲ....။
အဟိ.. စစ်ခံရတာ ရီရတယ်..
မကေပြောသလို.. ဂျင်းဂျက်ကက်ပိုင်ရှင် အကြောင်း ချိတ်ဝင်စားတယ် အဟဲ ။
တစ်နေ့ လာလည်ချင်ပါတယ် .. =)
အဲဒါတော့ သူတို့ အဒွန့်မတက်ပဲ ပြန်ချလိုက်တယ်။
ရီစရာလိုလို ဂုဏ်ယူရမလိုလိုနဲ့နော်... ကဗျာတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပြောပါတယ်
ကျွန်တော်လည်း ကြုံဖူးပါ့ ခင်ဗျား..
စာတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်တိုင်း စာဖတ်သူတွေ ခံစားမိမှာက အကြောင်းအရာ ဆက်နွယ်ခြင်းပါ။ သုံးစွဲတဲ့ စကားလုံး၊ ဖေါ်ပြဟန် အစရှိသည်ဖြင့်ပေါ့။ တခါတရံ ဂျပန်စာပေမှာ တွေရတဲ့ တွေးခေါ်ပုံက အိန္ဒိယစာပေမှာလည်း တွေ့ရတတ်တယ်။ အိန္ဒိယရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အများစုကတော့ မြန်မာဘက်ကို ရောက်လာတာများပါတယ်။ စာရေးတဲ့ သူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ တိုက်ဆိုက်မှုတွေလည်း ရှိတယ်။ ယဉ်ကျေးမှု တွေ ကူးလူးပြီး evolve ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်း ရှိတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက မလေးငယ် တို့ရွာက နာမယ်တွေ ပေးပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖတ်မိလိုက်တာနဲ့ ဆက်နွယ်သွားတာက John Steinbeck က East of Eden ထဲမှာ အမေရိကကို ကနဦး လာရောက် အခြေချ နေထိုင်သူတွေ က မြို့နာမည်တွေကို ဘယ်လို့ ပေးခဲ့ကြသလဲဆိုတာ အကြမ်းဖျင်းလေး ဖေါ်ပြထားတာနဲ့ တူနေလို့ပါ။ အဲဒါ ဖတ်တုန်းကဆို ကိုယ်နေခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်က ရက်ကွက်တွေ နာမည် ဘယ်လို့ ရလားသလဲ့ဆိုတာ တော်တော်လေး ရှာရသေးတယ်။ သေသေချာချာ ကျမ်းပြုထားတာတွေ မရှိတော့ သမိုင်းအထောက်အထားတွေက ခက်တာပေါ့။ အဲဒါကို စွဲပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ နေရာတစ်နေရာရောက်တိုင်း ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ သူ့တို့ရဲ့ နာမည်တွေ ဘယ်လိုရလာသလဲဆိုတာ မဖြစ်မနေမေးတော့တာပဲ။ ဗင်ကူးဗားဆိုတဲ့ နာမယ် ဘယ်လိုရလာတာလဲ ဟင်?
(ကာဘော်လိပ် ဆပ်ပြာက ဂျီး ပိုပြောင်တာပေါ့။ အိမ်က သေချာထည့်ပေးလိုက်တာ နေမှာပါ။)
ကာဘော်လိပ် ဆပ်ပြာဆိုတာ ရိုးရိုးဆပ်ပြာထက် အနံ့ပိုစူးတာမျိုးလား .. ဘာလို့သူတို့ က ထူးဆန်းနေတာလဲဟင် ..
ဂျင်းဂျက်ကတ် အကြောင်းပြောပြပါဗျို့ 
ကျွန်ကတော့ ရေးလိုက်ရတာ စာဖတ်သူတွေကတော့ ဂျင်းဂျက်ကက်ကို ပိုစိတ်ဝင်စားနေတော့ ကျွန်မ ရယ်ချင်မိတယ်။ အခုတော့ နေ့ရောညရော မြန်မာပြည်သတင်းကလွဲလို့ ကျန်တာစိတ်မ၀င်စား အလုပ်ပျက်၊ အစားပျက်မို့ နောက်မှ သူငယ်ချင်းများကို ဂျင်းဂျက်ကတ်အကြောင်းပြောပြပါတော့မယ်။
နောက် တောဆင် တစ်ကောင် ခမည်း ရပြန်ပြီ။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ တစ်နေ့ ဆိုပါလား။
တက်တုန်းက တက်ပြီး ခုမှ ကွန်မန့်ပွတ်တာ ချိတ်ချိုးရ၀ူးနော် ကမ္ဘာ့ နေလို့ အကောင်းဆုံးမြို့ကို အလည် ဖိတ်တာ ကျေးဇူးပါ။ မအိမ့်ရဲ့ Immigration က အတွေ့အကြုံက တော်သေးတာပေါ့.. ဦးလေးတွေ ၀င် တုန်း ကဆို ငံပြာရည်ကို မန္တလေး ဘီယာ ပုလင်းထဲ ထည့်သယ်တဲ့ အနံ့ကို ခွေးတွေက မခွဲခြားတတ်တော့ စိတ်ရှုပ်ပြီး အုပ်လိုက် ထအူကုန်လို့ အဟီး… လေဆိပ်ကို စည်ကားသွားတာပဲတဲ့။ လှိုင် အော်စီသွားတုန်း ကလဲ စိတ်ပုတီးနဲ့ သွေးဆေးကြောင့် အနီပေါက်မှာ အချိန်ကြာ သွားသေးတယ် နောက်မှ ပြောပြမယ်နော်
ကျွန်မလဲခြင်္သေ့မြို.တော်မှာ ရှေက်သီးဆေးပြားဗူးနဲ.ပြဿနာတက်ခဲ့ရသေးတယ်။ ဟက်ဟက်။ လာလည်ပါဦး။ ဒါနဲ. အမက US ကနေဒါဘော်ဒါနားကမြို.မှာနေတာလားဟင်? ကျွန်မလဲ US ထဲက ကနေဒါနယ်စပ်နားကမြို.လေးကိုပြောင်းမလို.လုပ်နေတာ။ အမနဲ. ဆုံလို.ရရင်ကောင်းမှာပဲ ဟဲဟဲ ငါးခြောက်တွေတော့ လက်ဆောင်မပေးတော့ဘူးနော်။
ရာဇဝင်က ဦးညွတ်ရတဲ့ ခဏ
(အရောင်မဲ့ စားပွဲခင်း )
တိုရန်တိုက ရဲရင့် လာလည်ချင်လို့ပါ။အိပ်စရာကျောတခင်းစာရရင်ဖြစ်ပါပြီ။တိုရန်တိုကိုလာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ရဲရင့်ဆိုဒ်လေးကဒီမှာပါ.